गुण्डालाई घुँडा टेकाउने अभियानमा कास्की प्रहरी | abc.com.np
गुण्डालाई घुँडा टेकाउने अभियानमा कास्की प्रहरी
कास्की । पर्यटकीय नगरी कास्की जिल्ला प्रहरीको प्रमुख बनेर आएका एसपी हरिबहादुर पालले गुण्डागर्दी बिरुद्ध अभियान चलाएपछि पोखरामा राजनीतिक आबरणमा गुण्डागर्दी गर्नेहरुको भागदौड मच्चिएको छ । गत मंगलबार नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलको आबरणमा असुली गर्दै आएका धनबहादुर छन्त्याल उर्फ लक्ष्मणलाई कास्की प्रहरीले हतियारसहित पक्राउ गरेपछि गुण्डाहरुबीच भागदौड मच्चिएको हो । प्रहरीले एक सातअघि छन्त्याललाई राजधानीबाट पक्राउ गरी पोखरा ल्याएको थियो ।
पोखरा ल्याइएका छन्त्यालको घरमा प्रहरीले खानतलासी गर्दा कुटुवा पेस्तोल र सो पेस्तोलमा लाग्ने दुई राउण्ड गोली बरामद गरेको दाबी गरिरहेका बेला एक सय भन्दा बढी प्रत्यक्षदर्शीले हस्ताक्षरसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा बुझाउँदै प्रहरीको आरोप साँचो नभएको जिकिर गरेका छन् । सुनियोजित तरिकाबाट प्रहरीले पेस्तोल आफ्नै खल्तीबाट झिकेर राखेको दाबीसहित जिल्ला प्रकाशन कार्यालय कास्कीमा निर्दोषलाई फसाउने प्रहरीमाथि कारबाही गरिनु पर्ने मागसहित उनीहरुले उजुरी दर्ता गरेका हुन् । गत चैत्र ५ दर्ता भएको उजुरीमा प्रहरीले छन्त्यालको घर खानतलासी गर्दा केही पनि नभेटेको र पछि प्रहरीले आफ्नै साथमा रहेको कटुवा पेस्तोल झिकेर मुचुल्का तयार पारेको उल्लेख गरिएको छ । उता छन्त्याससँग हिमचिम गरिरहेका नरेन्द्र थापालाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेलको छ । थापा कास्की क्षेत्र नं.३ का सभासद् यज्ञबहादुर थापाका नाती हुन् । प्रहरीले अपराध गरेको कुनै प्रमाण नभेटेपछि थापामाथि सार्बजनिक मुद्दा लगाएको छ । उता एसपी पालले राजनीतिक आबरणमा गुण्डागर्दी गर्ने कसैलाई पनि नछाड्ने बताउँदै छन् । थापालाई छुटाउन नेपाली काँग्रेसका बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले समेत एसपी पाललाई फोन गरेका थिए । तर,एसपी पालले बरिष्ठ नेता देउवालाई समेत नटेरी सभासद्का नातीलाई थुनामा राखेका छन् । एसपी पालले हतियारसहित पक्राउ परेका गुण्डा र राजनीतिक आबरणमा आपराधिक काम गर्ने कसैलाई छाड्न नसकिने भन्दै कानून अनुसार कारबाही गरिने बताए । छन्त्याल र थापा दुबै कास्की तरुण दलसँग आबद्ध छन् । पक्राउ परेका थापा र छन्त्यालको रिहाईका लागि तरुण दल कास्कीका अध्यक्ष मनोज गुरुङ र लेखनाथ नगर कमिटिका अध्यक्ष सागर गुरुङले सयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकाली उनीहरुको रिहाईको माग गरेका थिए । तरुण दलको मागबारे प्रहरीले खासै सुनवाई गरेको छैन ।
उता आफ्नो मागको सुनवाई नभए कडा भन्दा कडा सर्घषको कार्यक्रममा उत्रिने चेताबनी दिएको तरुण दल अहिले ‘नुन खाएको कुखुरा’ जस्तै बनेको छ । यसअघि प्रहरीको टाउको फुटाउने महेन्द्र भोटे र उनको समूहलाई समेत प्रहरी हिरासतमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । छन्त्याल बागलुङ जिल्ला घर भई हाल लेखनाथ नगरपालिका वडा नं. १ सैनिकबस्तीमा बस्दै आएका छन् । प्रहरीले राजनीतिक आबरणमा ब्यापारीसँग असुली गरेको आरोप समेत छन्त्यालमाथि लगाएको छ । यसअघि पनि छन्त्याल हातहतियार मुद्दामा ८ महिना जेल सजाँय काटेर बाहिर आएका थिए । पोखराका डन विक्रम लामाको समूहमा आबद्ध छन्त्यालले लामा लागूऔषधमा जेल चलान भएपछि पोखरामा हुने असुलीमा एकछत्र राज गर्दै आएका थिए । छन्त्यालसँग हिमचिम र ब्यबसायीक साझोदारी गर्दै आएका नरेन्द्र थापाको भने यसअघि कुनै पनि मुद्दा मामिला नभएको र उनी कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलापमा समेत नलागेको स्वयम् प्रहरीले बताएका छन् ।
एसपी पालमाथि गम्भिर आरोप: राजधानीबाट पक्राउ गरी पोखरा पुर्‍याइएका छन्त्यालको परिवारले समेत सुनियोजित रुपमा हतियार हालेर प्रहरीले छन्त्याललाई फसाएको आरोप लगाएको छ । छन्त्यालकी आमाले त आफ्नै अगाडि प्रहरीले कटुवा पेस्तोल निकालेर घरबाट बरामद भएको भन्दै मुचुल्का तयार पारेको बताएकी छिन् । यद्यपी छन्त्याल गुण्डागर्दी र आपराधिक क्रियाकलापमा लागेकोमाथि कुनै दुई मत छैन । असुलीका नाईके छन्त्यालकी आमाले मात्र आरोप नलगाई एक सय भन्दा बढी स्थानियले फसाएको आरोपसहित न्याय दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा उजुरी हालेपछि प्रहरमाथि शंका उब्जिएको छ । सोझा र हट्टी स्वभाव भएका एसपी पालले यो आरोपलाई कसरी खण्डन गर्ने हुन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ । आपराधिक क्रियाकलापमा पुरै मुलुकभर नाम कमाएको एलजी समूहका नाईके ललित गुरुङलाई भने प्रहरीले कुनै कारबाही गरेको छैन । बरु, केही समय पहिला पोखरा पुगेका नेता खुमबहादुर खड्का र शंकर भण्डारीले ललित आफ्नो मान्छे भएकाले केही नगर्न डीएसपी केदार रजौरेलाई साँग्रिला होटलमा राखेर भनेका थिए । गुण्डाका नाईके ललित र प्रहरीको सम्वन्ध अहिले नङ र मासुको भएकोमा प्रहरी नै आश्चर्यमा परेका छन् ।
कास्कीमा ४० पेटीको चर्चा: पोखरामा एकदमै राम्रो काम गरेर नाम कमाईरहेका एसपी पालमाथि ४० लाख खर्चेर पोखरा ल्याइएको हल्ला गुण्डाहरुले चलाएका छन् । एकताका रुपाकोट रिर्सोटका सञ्चालक पुष्पराज अधिकारीसँग छन्त्यालको दुश्मनी बढेको थियो । रुपाकोट होटलका सञ्चालक अधिकारीसँग असुली माग्दा नदिएपछि छन्त्याले उनलाई पिटेका थिए । ‘मेरो आमाबुबाले समेत मलाई एक थप्पड हानेका छैनन, यो गुण्डाले मलाई पिट्ने ? यसलाई सिध्याउन म एक करोड रुपैयाँ खर्च गर्छु ।’ उनले त्यतिबेलादेखि भन्दै आएकाले छन्त्याललाई हतियार हालेर फसाउने काममा अधिकारीको हात हुन सक्ने आशंका छन्त्याल निकटकाले गरेका छन् ।
गुण्डा बनाउने मेशिन ब्यापारी: पर्यटकीय नगरी पोखरामा सर्वप्रथम टोले गुण्डा र डन उत्पादन गर्ने को हो त ? भन्दा यतिखेर पनि कास्की उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष बिन्दुकुमार थापाको नाम आउने गर्छ । पोखरामा प्लटिङ ब्यबसाय सुरुवात गर्दा नै उनले युवाहरुलाई गुण्डागर्दीमा लाग्न प्रोत्साहन गरेका थिए । सोही क्रममा थापाले ‘एलजी ग्याङ’को उत्पादन गरेका हुन् । अहिले एलजी फुटेर टुक्राटुक्रा भएपनि एलजीका नाईके ललित गुरुङको नाम अहिलेसम्म चर्चामा छ । गुण्डाका नाईके गुरुङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘एलजी माफिया’ को नामबाट एकाउण्ट सञ्चालन गरिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा उनीहरुको सिको गर्दै बर्षेनी दर्जनौं युवा गुण्डागर्दीमा लाग्ने गरेका छन् । त्यसो त, नव डन उत्पादन गर्नेमा पछिल्लो समय तरुण दलका कुमार सुनवार र सागर गुरुङको पनि नाम आउन थालेको छ । उनीहरुकै निर्देशनमा खुकुरी हान्ने अभिषेक सुनवार र उदय सुनवार अहिले प्रहरीको वान्टेड सूचिमा छन् । केही समय पहिले युवराज मगर र उनको समूहलाई खुकुरी हानी उनीहरु फरा भएका थिए । एमालेका विष्णु पुनको पनि नाम गुण्डा उत्पादन गर्ने सूचिमा आउन थालेको छ भन्दै मंगलबार प्रकाशित जनप्रकार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।